Mudaneyaasha baarlamaanka oo kulmaya maanta – Radio Muqdisho
Mudaneyaasha Baarlamaanka ayaa maanta kulan ku leh magaalada Muqdisho, ayagoo ka hadli doono mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ee ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada Baarlamaanka.
Xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud oo ka tirsan xoghaynta baarlamaanka ayaa Radio Muqdisho u sheegay in sidoo kale ay xildhibaanadu ay ka doodi doonaan miisaaniyadda sanadka 2015-ka oo ay xukumaddu soo gudbisay.
Golaha Baarlamaanka ayaa ku dhawaad bil ku kala qeybsanaa mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ee ay soo gudbiyeen mudaneyaasha qaarkood, saddex fadhi oo hore ayuu booq hareeyay. Guddoonka Baarlamaanka ayaa ka codsaday mudaneyaasha inay sharciga ilaaliyaan isla markaana ay suurta galiyaan hannaan ay ku socon karto shaqada Baarlamaanku.
Muungaab: "Shacabku ha la shaqeeyaano hay'adaha ammaanka"